Sarimihetsika mahatsiravina 50 lehibe hijerena an'i Tubi
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Sarimihetsika mahatsiravina 50 lehibe hijerena an'i Tubi
by Brianna Spieldenner Aprily 1, 2020
by Brianna Spieldenner Aprily 1, 2020 26,765 hevitra
Saika ny olona rehetra mipetraka ao an-trano amin'izao fotoana izao dia manana fampihetseham-batana tsy ampoizina ny tranokala streaming. Betsaka ny olona no nirohotra nankao amin'ny Netflix, Amazon Prime, ary Hulu hiandry ny quarantine. Ny serivisy streaming Tubi kosa dia toa tsy nahazo setroka be loatra, na dia maimaim-poana tanteraka aza. Raha manana fotoana malalaka eny am-pelatananao (izay ataontsika rehetra) dia makà fotoana kely hijerena horonantsary mampihoron-koditra mahatsiravina 50 ao Tubi dieny izao!
Mety hisy hieritreritra fa satria serivisy mivantana maimaim-poana izy ireo dia tsy hanana katalaogy tsara hisafidianana, saingy azo antoka fa tsy izany no fijerena horonantsary mampihoron-koditra mahatsiravina ao amin'ny Tubi. Nandamina horonantsary ho sokajy dimy aho: sarimihetsika mampihoron-koditra mahazatra, sarimihetsika mampihoron-koditra mahatsiravina sy mampatahotra, sarimihetsika mampihoron-koditra avy any ivelany, hatsikana hafahafa mampihoron-koditra ary mahita sarimihetsika mampihoron-koditra. Noho izany, vakio eto ambany raha hijery ny sarimihetsika mampihoron-koditra tsara indrindra hijerena an'i Tubi!
Sarimihetsika mahatsiravina klasika amin'ny Tubi
Ny fandripahana tao amin'ny Chain Texas (1974): Ny tantaran'i Tobe Hooper maharikoriko momba ny fianakaviana Sawyer mpihinana kanibalista, mamakivaky an'i Texas isaky ny zatovo!
Hellraiser (1987): Adala ireo taona 80, krizy ity sarimihetsika ity. Boaty piozila iraisana, zombie tsy misy hoditra, BDSM, demonia miakanjo tsara, ary siny misy rà. An'ity sarimihetsika ity daholo.
Suspiria (1977): Iray amin'ireo horonantsary Giallo fanta-daza notarihan'ny angano Dario Argento. Ity flick misy loko ity dia manaraka zazavavy amerikana iray izay nisoratra anarana tamina akademia dihy malaza Alemanina tantanan'ireo mpamosavy miafina.
Andron'ny maty (1985): Ny fanarahana ankalazana ny Alina George Romero sy Dawn of the Dead. Vondronà mpahay siansa sy mpiasa miaramila no tafahitsoka ao anaty bunker ambanin'ny tany satria mandrahona azy ireo etsy ambony ny apokalypsy zombie.
Fetin'ny fanahy (1962): Sarimihetsika mainty sy fotsy tsy dia nankasitrahana izay manomboka tranga hafahafa amin'ny vehivavy iray taorian'ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina.
Klowns mpamono olona avy amin'ny sehatra ivelany (1988): Ity sarimihetsika mampihoron-koditra mampihoron-koditra ity dia nampody olon-kafa tsy fantany satria mampihorohoro ny tanàna amerikanina ny koro.
Toby natory (1983): Ity camp camp fahavaratra ity dia ny famaritana ny campy, miaraka amina famaranana tadidinao.
romotra (1977): Sarimihetsika zombie sy mahatsikaiky nataon'i David Cronenberg. Ny tovovavy iray dia mitombo fitomboana hafahafa izay mahatonga azy maniry fatratra ra aorian'ny fandidiana mafy taorian'ny lozam-pifamoivoizana.
Ginger Snaps (2000): Ity sarimihetsika vehivavy ho avy amin'ny taona ity angamba no sarimihetsika werewolf mamelombelona indrindra hitanao. Ny vokatra azo tsapain-tanana dia tsara indrindra.
Fandripahana tamin'ny fety natory (1982): Ny maniac mpitaingina boribory dia manelingelina fety matory ara-nofo ao amin'ity sarimihetsika slasher mahazatra ity. Izy io koa dia manao izay mahavariana ny karazana slasher amin'ny fomba mialoha ny fotoany.